2021-09-12 06-09 Hamro Biratnagar
तेजन खड्का : गत सोमबार बिहान। संखुवासभाको मादी- १ उम्लिङमा एउटा चिच्च्याहट आयो, 'गुहार ! गुहार !! लोकेले मार्‍यो, गुहार ! मलाई बचाऊ।'
उक्त आवाज थियो, तेजबहादुर कार्कीको। उनलाई आफ्नै भतिजाले चिर्पटले अन्धाधुन्ध प्रहार गरिरहेका थिए। भतिजको प्रहारबाट तेजबहादुरको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। उक्त चिच्च्याहटका कारण तेजबहादुरकी श्रीमती कमला र बुहारी रञ्जना पनि घटनास्थलतर्फ हस्याङफस्याङ गर्दै आए।
लोकबहादुरले कमला र रञ्जनालाई देखेपछि पोल खुल्ने डरले त्यही चिर्पटले टाउकोमा प्रहार गरेर मारे। लोकबहादुरको क्रूर हत्याको क्रम त्यतिमै रोकिएन। उनले अबोध बालबालिकाको पनि निर्मतापूर्वक हत्या गरे। विपीन र गोमालाई पनि कोपिलामै चुँडे। विपीन कार्की आठ वर्षका थिए भने गोमा कार्की पाँच वर्षकी थिइन्। बालबािलकाहरूले आफूलाई चिनेका कारण लोकबहादुरले लखेटीलखेटी उनीहरूको पनि हत्या गरे।
प्रहरीले शंका लागेका छिमेकीहरूसँग अनुसन्धान सुरु गर्‍यो। पत्रकार तथा युट्युबरहरू पनि त्यहाँ पुगेका थिए। रोचक कुरो त के छ भने, जसले हत्या गरेको छ, उनै लोकबहादुर कार्की पत्रकारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिने गरेका थिए। उनी भन्ने गर्थे, 'बडाबा (तेजबहादुर) एकदमै समाजसेवी सहयोगी हुनुहुन्थ्यो, परिवार नै सखाप हुने गरी कसले हत्या गर्‍यो ?'
तर, घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले 'सुनचाँदी, पैसा घरमै रहेछ भनेको छ नि ?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘रिसइबीले नै हो कि जस्तो छ। यो घटना गम्भीर छ।’
‘केटीले धोका दिएपछि लोकबहादुर दुई पटक मानसिक सन्तुलन गुमाएर हिँडेको थियो। विदेश गएका बेला केटीलाई पैसा पठाउँदो रहेछ। पछि नेपाल फर्किंदा केटी सम्पर्कविहीन भएपछि मानसिक सन्तुलन गुमेको हो’, मृतकका भतिजा विनोद कार्कीले भने, ‘पछि आफैँ ठिक भएको सुनेको थिएँ।’
« नेकपा एस वागमती संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र पाण्डे चयन
दुई किलो लागुऔषध अफिमसहित तीन जना पक्राउ »